Showing १-१० of ९९ items.
खैनीकाे तलतल लागेपछि चेन तानेर ट्रेन राेके
ब्लाष्टखबर । दादर- गोरखपुर कोविड स्पेशल ट्रेनमा सवार एक व्यक्तिले चेन तानेर ट्रेन राेकेपछि ट्रेन राेक्नुकाे कारण सुनेर भारतिय रेल्वेका कर्मचारीहरू हैरान भएका छन् । सराय कंसराय स्टेशन नजिकै गोरखपुरका बिल्ला नाम गरेका एक व्यक्तिले ट्रेन राेकेका थिए । रेल्वेका कर्मचारीले ट्राेन राेक्नुकाे कारण सेध्दा खैनी किन्न राेकेकाे बताएकाे भारतिय संञ्चार माध्यमले जनाएकाे छ । चेन तानेर ट्रेन राेकेपछि कर्मचारी र प्रहरी सक्रिय भई चेन तान्ने व्यक्तिकाे खेजी गरिएकाे थियाे । ट्रेन राेकी खैनी खरिद गरी पुन : ट्रेन तर्फ फर्कदै गरेका विल्लालाई प्रहरी तथा कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिई साेधपुछ गर्दा
काेराेना पीडाः सन्तान बचाउन जसले ढुङ्गाे उमालिन् ...(भिडियाेसहित)
ब्लाष्टखबर । आठ बच्चाहरुकी आमाले आफ्ना भाेका बच्चाहरूलाई केहि पाक्दै गरेकाे विश्वास दिलाउन भाँडामा ढुङ्गा हालेर उमालेकाे समाचारले संसारका मिडियाकाे ध्यान तानेकाे छ । केन्याकाे माेम्बासामा बस्ने पेनिनाह भाटी कितासाे नाम गरेकी महिलाले आफ्ना भाेका सन्तानलाई ढुङ्गा पकाएर खानाकाे पर्खाइमा बच्चाहरू निदाउने विश्वासले यस्ताे गरेकाे त्यहाँकाे एक टेलिभिजले समाचार प्रसारण गरेकाे छ । एनटिभि केन्याका अनुसार केतासाे अशिक्षित महिला हुन् । उनी छिमेकीकाे कपडा धुएर गुजारा गर्ने गर्थिन् । पछिल्लाे समय काेराना भाइसरका कारण मानिसहरूमा सामाजिक दुरी कायम गर्ने भन्दै उनलाई त
ब्लाष्टखबर । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार साझ कोरोना विरुद्ध एकला देखाउन भारतिय नागरिकलाइ दियो बाल्न आग्रह गरेका थिए । उनको आग्रह अनुरुप भारतका आम सर्वसाधरण देखी लिएर सेलिब्रेटी, राजनितीज्ञ, व्यापारी लगायतले आइतबार साझ ९ बजे देखी ९ मिनेट सम्मकालागि आफ्नो घरको वत्ती मारेर दियो मैनवत्ती, टर्च लगायत बालेर कोरोना विरुद्ध एकता देखाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको उक्त आनव्हानलाई सर्मथन गर्दै एक व्याक्तिले आफ्नो शरिरको वरिपरी मैनवत्ती बालेको भिडियो यतिबेला सामाजिक संञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । बलिउड अभिनेत्री पूजा बेदीले टुइटरमा सेयर गरेको उक्त भिडियोमा एक व्याक्ती सिल्भर कलरको लुगा लगा
साढे ६ महिने बच्चाको पेटमा २५० किलोग्रामको भ्रुण
ब्लाष्टखबर । बिहारको प्रतिष्ठित अस्पताल पटना मेडिकल कलेजमा बुधबार, साढे ६ महिनाको बच्चाको शल्यक्रिया गरि पेटबाट भ्रुण निकालेको सार्वजनिक भएको छ। बच्चाको पेटबाट २५० किलोग्रामको भ्रुण निकालीएकाे शिशु विभागका सर्जन डा. अमरेंद्र कुमारले समाचार एजेन्सी आईएएनएसलाई बताएका छन्। उनले बच्चा दुई महिनाको हुदाँ देखीनै पेट फुल्ने समस्या उत्पन्न हुन थालेकाे बताउदै । समय वित्दै जादाँ पेटमा रहेकाे गर्दा बच्चाको पेटमा रहेकाे गर्भ पनि हुर्कदै गरेकाे बताए । बिहारको बक्सर जिल्लाकाे उक्त शिशुमा पेटदुख्नु समस्या भउकाे भन्दै अविभावकले जिल्लाकै अस्पतालमा देखाएपछि ट्युमर भएकाे हुनसक्ने भन
दमक/ झापाको दमकस्थित आम्दा अस्पतालमा टाउको नभएको शिशुको जन्म भएको छ । दमक–२ स्थित आम्दा अस्पतालमा मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–७ की गुराँस कार्कीले टाउकोविहीन बच्चालाई जन्म दिएकी हुन् । २४ वर्षीया आमा गुराँस र ३० वर्षीय सुजन कार्कीको दोस्रो सन्तानको रूपमा जन्मिएकी छोरीको टाउकोको माथिल्लो भाग छैन । बच्चाको स्वास्थ्यप्रति परिवार चिन्तित बनेका छन् । बाबु सुजन भन्छन्, ‘ज्यामी काम गर्छु श्रीमतीलाई गर्भवती भएका बेला पनि समय–सयमा स्वास्थ्य परीक्षण त गराएकै थिएँ तर अहिले यस्तो के भयो ?’ सुजनका अनुसार श्रीमतीलाई पनि दुई वर्षदेखि पैसा आकारको दाद रोगले सताइरहेको छ । अस्पताल
दक्षिण–पश्चिम फ्रान्समा वैज्ञानिकहरूले उत्खनन्का क्रममा भीमकाय डाइनासोरको जाङको हड्डी फेला पारेका छन् । बीबीसीका अनुसार यी वैज्ञानिक एक दशक अघिदेखि जीवावशेषको खोजीमा लागिरहेका थिए । दुई मिटर (६.६ फिट) को यो जाङको हड्डी ओन्जेक इलाकामा भेटिएको हो र यो सोरोपोड डाइनोसोरको भएको बताइएको छ । यो डाइनोसोर शाकाहारी थियो जसको गर्दन लामो र पुच्छरसमेत थियो । जुरासिक कालको अन्तिम वर्षहरूमा सोरोपोड सामान्य रुपमा भेटिन्थे । यो अहिलेसम्मकै भीमकाय जनावरमा समावेश छ । जीवावशेषको खोजी गरिरहेका वैज्ञानिकहरु अहिलेसम्म पनि त्यस्तो हड्डी फेलापरेपछि अचम्मित भएका छन् । नेशनल हिस्ट्री म्युजियम अफ पेरिसका रोनान
दुईटा केराको दाम भारु ४४२
बलिउड अभिनेता राहुल बोस आजभोलि भारतको चण्डीगढमा सुटिङमा व्यस्त छन् । उनी त्यहाँस्थित फाइभस्टार होटलमा सुटिङका लागि बसेका छन् । उनले ट्वीटरमा आफ्नो एउटा भिडियो सेयर गरेका छन्, जसमा उनले दुईवटा केरा मगाएपपछि होटले उनलाई ४४२.५० भारु को बिल थमाइदिएको छ । राहुलका अनुसार उनी होटलमा जिम गरेर जब आफ्नो कोठामा गए, उनले स्टाफलाई केरा ल्याउन भने । स्टाफले प्लेटमा सजाएर दुईवटा केरा दिए र साथमा फुड प्लेटरको बिल दिए जसमा जीएटीसमेत दुई केराको दाम ४४२.५० लेखिएको थियो । यो बिल देखेर राहुल तीन छक्क परे । You have to see this to believe it. Who said fruit wasn’t harmful to your existence? Ask th
अमेरिकी अखबार वासिङटन पोस्टको फ्याक्ट चेकर्स डेटाबेसले डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपति भएपछि अहिलेसम्म १० हजार ७ सय ९६ पटक झुठ बोलेको दावी गरेको छ । यतिमात्र होइन अमेरिकी राष्ट्रपति भएपछि ट्रम्पले दैनिक औसत १२ पटक ढाँट्ने गरेको बताइएको छ । भारत र पाकिस्तानी सीमा कश्मिर मामिलामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अन्तर्राष्ट्रिय ढाँटले पूरै विश्वमा तहल्मा मच्चिएको भारतीय सञ्चार माध्यम आजतकले उल्लेख गरेको छ । वासिङटन डीसीमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानका साथ भेटघाटका क्रममा डोनल्ड ट्रम्पले भारतले कश्मिर मुद्दामा उनलाई मध्यस्थताको अपिल गरेको र आफू तयार रहेको बताएका थिए । यद्यपि भारतीय